သံရည်ကျိုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများ အရောင်းကျလာသဖြင့် လုပ်ငန်းများ လျော့နည်းလ? - Yangon Media Group
အောင်လံ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၆- မကွေးတိုင်းဒေသကြီး သရက်ခရိုင် အောင်လံမြို့နယ်အတွင်းလယ်ယာသုံးပစ္စည်းများကို အားထားထုတ် လုပ်သော သံရည်ကျိုလုပ်ငန်းများမှ ဈေးကွက်ဖြုန်းအားမရှိသဖြင့် လုပ်ငန်းများလျော့နည်းလာနေကြောင်း ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်များထံ မှသိရသည်။
”ဒီသံရည်ကျိုလုပ်ငန်းကဘိုးဘွားမိဘတွေ လက်ထက်ကနေ လုပ်ခဲ့တာပါ။ အရင်က လယ်ယာသုံးပစ္စည်းတွေထယ်သွားတွေကို နှစ်ပတ်လည်ထုတ်လုပ်ခဲ့ရတာပါ။ နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ထွန် စက်တွေ၊ လက်တွန်းထွန်စက်တွေ များလာတော့ ထယ်သွားသုံးစွဲတာ လျော့ကျလာပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နှစ်သုံးနှစ်ကစပြီး နိုင်ငံခြားက ထွန်စက်အကောင်းစားတွေ တွင်ကျယ်လာတော့ ထယ်အသုံးပြုမှု နည်းကာ ဆယ်ပုံတစ်ပုံပဲလုပ်ရပါတော့တယ်။ အခုလောလောဆယ် မှာ စက်ပစ္စည်းအပိုတွေနဲ့ အပ်ထည်တွေကိုအားကိုးလုပ်နေရတာ ပါ”ဟု အောင်လံမြို့ရှိ ပစ်တိုင်းထောင်သံရည်ကျိုလုပ်ငန်း ပိုင်ရှင် ဦးသိန်းအောင်က ပြောကြားသည်။
အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း လယ်ယာသုံးကိရိယာများထုတ်လုပ် ရာတွင် လောင်စာအဖြစ် ယခင်ကထင်းနှင့်မီးသွေးကို အသုံးပြုရာမှ ယခုအခါ ရေနံမီးသွေးလောင်စာတောင့်ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုနေကြောင်း အစိုးရရေနံချက် စက်ရုံများမှထုတ်လုပ်သော ရေနံမီးသွေးလောင်စာ တောင့်မှာ တစ်ပိဿာ ကျပ်၆ဝဝရှိပြီး ကုန်ကြမ်းသံဈေးမှာလည်း ကြီးမြင့်လာနေကြောင်း သိရသည်။
အသေးဆုံးထယ်မှာ တစ်ခုကျပ် ၁၅ဝဝနှင့်အ ကြီးဆုံးထယ်မှာ ကျပ် ၃ဝဝဝဈေးရှိပြီး မကွေးမြို့၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ ပြည်မြို့နှင့် သရက်မြို့များသို့အများဆုံး တင်ပို့ရောင်းချကြောင်း ယခုအခါထယ် အမှာများ လျော့ကျကာ သံပန်းအလှကုန်ကြမ်းများ၊ ဆီစက်အပိုပစ္စည် များနှင့်အခြားအပ်ထည် သံရည်ကျိုပစ္စည်းကိုသာ အားထုတ်လုပ်နေရ ကြောင်း သိရသည်။
နယ်စပ်၌ မှောင်ခိုကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူသူများကို ဖမ်းဆီးမည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ ဆိုင်းဘုတ်ထောင??
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်တွင် မိုဒရစ် ဆက်ရှိမည်ဟု နည်းပြ လိုပီတီဂွီ အခိုင်အမာ ဆို
”ဇာတ်ကားတစ်ကားမှာ ပါရင်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့တော့ မရိုက်ဘူး” သွန်းဆက်